Ma jiraan hab lagu daabaco xiriirada ka iPhone 6S Plus / 6S / 6 Plus / 6/5?
Waxaan jeclaan lahaa in ay daabacdo liiska xiriirada iPhone aan, oo ay la socoto faahfaahin xiriir kasta. Habka ugu fiican ee aad samaysid waxa haddii aan dhammaan macluumaadka xiriirka fudud looga heli karaa isbiriidhshiit Excel ama wax la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, Ma hubo sida - qof ii caawin karaa?
Marka daabacaadda xiriirada iPhone, waa in aad jeceshahay liiska la info buuxa ee khariidad weyn, sida file HTML ah, ama isbiriidhshiit Excel ah ee kor ku xusan. Nasiib wanaag, laba halkan qalab aad raali galin lahayd. Mid ka mid ah waa Wondershare TunesGo (Windows) (macruufka 9 taageeray). Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhoofin xiriirada on xasuusta iPhone, Yahoo !, iCloud, Exchange, iwm sida faylasha CSV. Qalabka kale ee dhinac saddexaad waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) (Windows) (macruufka 9 taageeray). Waxaad u isticmaali kartaa si aad u dhoofiyaan xiriirada iPhone si aad u file HTML ah.
Xalka 1: Print iPhone xiriir la TunesGo
Xalka 2: Print xiriirada ka iPhone la Dr.Fone ee macruufka
Qalabkani waxa uu kuu ogolaanayaa inaad dhoofin xiriirada si file CSV la lambarka taleefanka, magaca shirkadda, cinwaanka email. Waxaa Download.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in PC Windows ah
Hel aad iPhone xiran PC Windows la cable USB ah. Ku rakib iyo abuurtaan qalab TunesGo on PC Windows ah. Qalabkani waxa uu si toos ah lagu ogaan doonaa ka dibna tusto iPhone uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: TunesGo kuu ogolaanaya in aad daabacdo xiriirada ka iPhone 6, iPhone 6 lagu daray, iPhone 5, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 4s iyo iPhone 5 marka ay ordaya macruufka 5 iyo 6.
Tallaabada 2. Print xiriirada iPhone
In galeeysid bidix, u tag "Xiriirada". Sida aad ka arki, xiriirada gaar badbaadiyey on xusuustaada iPhone, iCloud, Yahoo !, Exchange, iwm Dooro koox xiriir ah, sida "On My iDevice" ama "iCloud". In uu suuqa kala xiriir xaq, dooro xiriirada in aad qorshaynaysid in aad daabacdo.
Markaas, guji "Import / Dhoofinta". In liiska hoos-hoos u, guji midkood "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" ama "Dhoofinta Xiriirada soo xulay". Waxaad ka heli liiska hoos-hoos kale. Dooro "si CSV File". Browse aad PC Windows si aad u hesho meel u badbaadiyo file CSV ah.
Ka sokow dhoofinta xiriirada si file CSV, waxa kale oo aad kartaa dhoofin xiriirada si badan ama file vCard hal (s) , Muuqaalka 2003/2007/2010/2013, Windows Cinwaanka Book, Outlook Express iyo Windows Live Mail.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta xiriirada dhoofinta on iCloud, Yahoo! Exchange iyo kuwa kale, waa in aad soo gasho, kuwaas oo xisaab aad iPhone hore.
Download TunesGo in ay isku dayaan sidii ay u daabacdo xiriirada ka iPhone.
Xalka 2: xiriirada Print ka iPhone Dr.Fone ee macruufka
Labada nooc oo Dr.Fone ee macruufka muujiyaan karaa ka kooban buuxa ee xiriirada, oo ay ku jiraan magacyada, lambarada, horyaal shaqo, cinwaanada emailka, iwm Waxaad si toos ah u daabacan kartaa sida file HTML ah oo aan sameeyo beddelid kasta. Hadda, download tijaabo ah oo lacag la'aan ah Dr.Fone ee macruufka hoos ku qoran oo ku xidh on your computer.
Hoos waxaa ku qoran, aynu isku dayi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) inay u dhoofiyaan xiriirada iPhone aad ee HTML soo daabaco. Haddii aad tahay qof user Windows ah, waxa kale oo aad qaadi kartaa talaabooyin la mid ah in ay la Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Kadib markii ay barnaamijka, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ah: soo kabsado Device macruufka. Ka dib markii aan sidaa yeelno, xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka sida soo socota:
Haddii aad tahay qof iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s user ah, uu furmo suuqa waa sidan:
Haddii aad tahay qof iPhone 4 / 3GS user, furmo suuqa la soo bandhigi doonaa sidan oo kale:
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso inaad daabacdo iPhone xiriirada ka gurmad Lugood, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada "Ladnaansho Lugood BFM, kaabta File" ka. Uma baahnid in aad in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka. Si toos ah Macdan gurmad Lugood iyo badbaadin xiriir ah.
Tallaabada 2. aad iPhone Scan xiriirada ku yaal
Hadda aad ku socoto inay soo galaan hab iskaanka qalabka haddii aad isticmaasho iPhone 4 / 3GS. Connect aad iPhone in computer iyo raac tilmaan-hoose:
1. Ku qabo iPhone, oo guji "Start" si ay u bilaabaan;
2. Ku hay "Power" oo badhamada "Home" waqti isku mid ah muddo 10 ilbiriqsi,
3. Fur "Power" button oo sii riixaya badhanka "Home" mid kale 15 ilbiriqsi.
Waxaad heli doontaa galay hab iskaanka in ka dib markii. Markaas iskaan kartaa iPhone xiriirada ku yaal. Wixii iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s dadka isticmaala, waxaad si toos ah riixi kartaa batoonka Start ku saabsan suuqa kala ugu weyn ee ay u bilaabaan iskaanka ah.
Tallaabada 3. Save iyo print xiriirada iPhone
Waxaad ka eegi kartaa xiriirada aad ee natiijada scan soo socda. Calaameeyey oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac. Markaas waxaad ka furan kartaa file u badbaadiyey oo si toos ah daabacan.
File HTML ka sokow, waxa kale oo aad ku badbaadin karto xiriirada aad sida VCF ama file CSV a on your computer, marka aad rabto in aad soo dhoofsadaan xiriirada si iPhone kale ama aaladaha kale ee Apple. Waxaa intaa dheer, software caawin karaan inaad hesho macluumaadka la tirtiro dhawaan haddii aad rabto inaad hesho dib.
iPhone Battery geeriyooday Fast: sababta iyo sida ay u badbaadi Waxaa
> Resource > iPhone > Sida loo Print Xiriirada ka iPhone ama Lugood ee kaabta